Wararkii ugu Dambeeyey ee barbaarta Sitti. – Xeernews24
Wararkii ugu Dambeeyey ee barbaarta Sitti.
28. April 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Waxaa shalay fashilmay oo laga dareeray Shir sasabasho ahaa oo lagu qabtay qabalaha 07 Dirir-dhaba, kadib markii lagu gacansaydhay , hooyooyin goobjoog ahaana ay si cad oo kulul usheegeen Inay dhallinta xaqdoonka la jiraan.
Isla shalay waxaa magaalada shinniile lagu xidhay dhawr dhalin barbaarta xaqdoonka ah , sidoo kale waxay saaka police ka qabalaha 09 Dirir-dhaba ku beegsanayaan dhallintii shinniile, waxayna u egtahay in maamulka qabalaha 09 Dirir-dhaba, lahaystayaashii lacagaha la wareegaayay ee hungoobay ay laaluush siiyeen , taas awgeed na si sharciga ismaamulka Dirir-dhaba ka baxsan ubeegsanayaan dhallinta xaqdoonka ah. Haddii ay ka waantoobi waayaan maamulka Dirir-dhaba dabadhillif nimada Ina iileey ha ogaadaan in warkooga oo caddaymo badan loo hayo ugudbi doono halka looga taliyo.
Waxaa Gobolka Sitti loo soo diray dhakhaatiir indhaha fiiqdo iyadoo ujeedadu tahay sasabasho maadaama laaluushkii lagu diiday.
waxaa wali kusugan jigjiga 16kii dhalinta iyo Labadii Aabo oo wali Dirir-dhaba la keenin . Sida lanoo xaqiijiyay way ka bexeen jeelka sababta loo keeni la’ayahayna waa sasabasho.
waxaa wali xidhan dhalintii jeelka Biki kujirtay waxaana xalay lagu daray Jamaal Aadan oo kamid ah dhalinta magaalada, waxaana xaqdarro kuxidhay nin kumagacaaban xafiiska debmi baadhista oo Shiine loo yaqaano ahna ragga aan kudabajirno ee addoonsiga dib ugurashada kuhayo Bulshada ,loonasoo jeestay in si dhaqso ah la isku dhaafiyo dulmigiisa.
waxaa Isla magaalada Biki lagusoo kordhiyay tiro aad ubadan o ciyaalkii liyuuga ee addoonsiga bulshada Deegaanka loo adeegsanaayay ah , cabsi xooggan oo laga qabo Deegaanadada xigo Galbeedka Dirir-dhaba oo sii labajibaarantay awgeed.
Cabsida kacdoonka aawgii waxaa maalmahan ba looga yeedhay oo ku maqnaa jigjiga dhawr kamid ah budhcaddii dib ucurashada ujoogtay degmooyinka Gobolka , waxaana la sheegaya in afar Gudoomiye degmo uu ka mid yahay budhcad (Axmed Maxamed) oo Biki addoonsi kuhaystay kamidyahay kuwa la badilay walise cid lagu badilay iyo iyaga Soo noqodkooga lama xaqiijin, In ay nolol kubaxaan baase udan ah.
Kacdoonka nabadaysan ee Barbaarta Sitti iyaa guux iyo jahwareer badan ka abuuray Addis Ababa iyadoo Maalmahan ba ay culaysyo iyo dhaqadhaqaaq xooggan oo xal uraadinta shacabka Deegaanka kudulman ay ka socdaan xafiiska looga arimiyo dalka .
waxaa quus kusoo dhammaday isku dayadii laaluush ka ahaa ay adeegayaaasha Ina iileey wadeen , waxaana dareen xooggan iyo guul sii galay kacdoonka nabadaysan ee Gobolka Sitti,
ugu dambayn wuxuu wali kasii socdaa kacdoonku Gobolka Sitti, waxaana cabsi xooggan kajirtaa meelo ay kamid yihiin Afdem oo qorshe kulul la maaggan tuugta haysato
Wixii warar sugan Soo kordho la soco;
Wariye Laba Doon.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/Kacdoonka-Barbaarta-Sitti.jpg 336 546 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-04-28 14:38:212018-04-28 14:38:21Wararkii ugu Dambeeyey ee barbaarta Sitti.
Baaq Diaspora sitti ka socdaa; Cc:Ugaaska iyo Gendaha Beesha Ciise Sawiradda maanta Muusa Bixii oo Geel Baadi Doon ah iyo Cabdi Iley oo Bookaarad...